Qofkii ugu horeeyey oo lagu muday talaalka ASTRANACE ee Oxford soo saartay. – Voice of Somalis In Exile
BIRMINGHAM (AM) ISIIN, 4th of Jan.2021: Brain Pinker oo 82-jir ah ayaa noqoday qofka ugu horeeya ee lagu mudo ama qaata, talaalka cusub ee Carona virus ee ay soo saareen kooxda Oxford ee ASTRAZENACA oo saakay uu ku qaatay Oxford |Universty Hospital NHS FOundation trust.
Waaxda caafimaadka ee UK, ee NHS ayaa noqotay tan ugu horeysa oo soo saartay talaalka naf-badbaadinka lagu doonayo ee ASTRZENECA taasoo ka sahlanaan doonta talaalada kale dhanka daabulidda si loo gaarsiiyo dalka oo dhan iyo dhanka Kaydintaba.
Brain Pinker oo ah qofka ugu horeeyey oo lagu muday talaalkaan ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay, in uu qaato ama lagu mudo talaalka COVID19 lagula tacaalayo isla markaasna wuxuu intaa ku daran in uu aad ugu hanweynayah in talaalku yahay mid ay soo saartay Kulliyadda OXFORD.
Dunida oo dhan ayaa xusul-duub ugu jirta la tacaallidda xanuunka Coronavirus oo galaaftan nolosha dad badan tan iyo dhamaadkii sanadkii 2019-ka.